"गणतन्त्र दिवस .... 'केवल विस्मात" :: Press Chautari ::
"गणतन्त्र दिवस .... 'केवल विस्मात"
देशका नागरिकले झिँनो प्रत्याभूति समेत गर्न नसकेको नेपालको गणतन्त्र ५ बर्ष पुगेको खुसीयालीमा गत साता देश–बिदेशमा थुप्रै कार्यक्रमहरु भए । देशका बिभिन्न शहरका खुल्ला चौर र बन्द कोठाहरुमा ५ बर्षे गणतन्त्रको महिमा गाइए । बिदेशमा रहेका बिभिन्न नेपाली दुतावास र कुटनीतिक नियोगहरुमा परम्परागत ढाँचा मै फुच्चे गणतन्त्रको “ह्याप्पी...डट डट” गरियो ।
दिवसकै अवसरमा उता देशमा राजधानी केन्द्रित थुप्रै कार्यक्रमहरु हामी प्रवासमा बस्नेहरुले नि हे¥यौ र सुन्यौ । टुँडीखेलमा सयौं जन आएर गाउनेहरुले गाए, नाँच्नेहरुले नाँचे र सधैं जसो बोलीरहने नेतागनले फेरी ५ बर्ष अगाडिकै कुरा बोले–“गणतन्त्र संस्थागत गरौं ।” मलाई त लाग्दैन कि गणतन्त्र संस्थागत गर्न पहाडमा बियाँडको डल्लो फोर्दै गरेकी मेरी आमाले रोकिन् । जनतालाई थाह छ –देशमा गणतन्त्र संस्थागत गर्न कसले रोक्यौ ? नागरिकले किन यसको प्रत्याभूति समेत गर्न पाएका छैनन् ? त्यहि चोर औंला जनता तिर ताकेर, मुखभरी फिँज काढ्दै भाषण गर्ने नेताहरु नै होइनन् र ?
सरकारले यसैबर्षदेखि गणतन्त्र दिवसलाई ३ दिन सम्म राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मान्नु पर्ने घोषणा त गर्यो । घर–घर र कार्यालयमा दिपावली गर्नु भनेर उर्दी लगायो । तर जनताले टेरपुच्छर लाएनन् । दिपावली गरेर राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मान्नलाई त जन जनले अनुभूति गर्नु प¥यो नि । हामी जात पिच्छेले फरक फरक समयमा मान्दै आएको दशैं तिहार, ल्होसार, साकेला र छठ आउँदा हाम्रो मनहरु कति आनन्दित र पुलकित हुन्छन् ? कति आतुर हुन्छौं हामी ति पर्व मनाउनलाई । जसको लागि सरकारले रोकतोक लगाउँदा समेत लुकीचोरी आकासबाजी र भूँइचम्पा बजाउँछौ । ती चाडहरुको प्रत्याभूति हामीमा छ र हामी यसलाई पर्वको रुपमा विशेष महत्वका साथ मान्ने गर्छौ । ठीक त्यस्तै प्रत्याभूति भएमा सरकारले ढोल बजाउनै पर्दैन ।
यसो हुँदा हुँदै हर्ष या विस्मातले सवत्र्र गणतन्त्रको महिमा गाए । देशका राष्ट्रपति रामवरण यादवले पौने दुईसयलाई तिनका छातीमा तक्मा टाँस्दै गर्दा गणतन्त्रको गीत रच्दै जेलनेल भोगेका गायक रुवीन गन्धर्वहरु चाँहि गाई रहेकै थिए । थाह छैन रुबिनहरु कहिले सम्म गाईरहने हुन ? तिनका सारंगी नफुटिन्जेल कि शहिद नभईन्जेल ? अस्ति यता हाम्रो शहरमा नि गणतन्त्र दिवस चियर्स गरियो । सरकार पक्ष नै आयोजक रहेको उक्त गणतन्त्र दिवसमा समाजका ठूला ठालु मात्रै देखिए । खै संघ संस्थाका टाउकेलाई मात्र सुटुक्क इमेल गरेर गणतन्त्रको ह्याप्पी चियर्स गर्नुले के अर्थ राख्छ कुन्नि ? कि अभैm नि गणतन्त्र सर्वसाधारणका लागि आ कै छैन ? यस्तो विभेदकारी परम्परा बारम्बार किन ? त्यो पनि रेष्टुरेन्टमा हुस्की र वाईनको गिलास ठोकाउँदै । बरु कुईन्स बृजपार्कको खाली पटाङ्गीमा सबै मिलेर शुद्ध पानी मात्रै पिएर गणतन्त्र दिवसको शुभकामना आदान प्रदान गरे सबैको चित्त भरिन्थ्यो कि ? जन–जनको गुनासो हो यो ।
माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध, राजा ज्ञानेन्द्रको दुई–दुईवटा महत्वकांक्षी कदम र १९ दिने बिशाल जनआन्दोलनमा सर्वसाधारणको कत्रो सहभागिता र योगदान थियो । तिनै परिवर्तनकारी जनताको टाउकामा टेकेर ०६२ मंसिर ७ गतेको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा दलका ठूला नेताले गला मिलाउँदैमा सबै जस ठुला ठालु भनाउँदालाई मात्र दिन मिल्छ र ?
मंगलवार, २०७० पुस २९ गते ०७:३९ / Tuesday, Jan 14, 2014 7:39 am